Hirshabeelle oo qaadacday shirka Golaha Wadatashiga | KEYDMEDIA ONLINE
Hirshabeelle oo qaadacday shirka Golaha Wadatashiga
Maamul goboleedka Hirshabeelle ayaa qaadacay shirka Golaha Wadatashiga Qaran, ee la filayo inuu maanta ka furmo magaalada Muqdisho.
MUQDISHO, Soomaaliya – War qoraal ah oo ka soo baxay Madaxtooyada maammulka Hirshabeelle, ayaa lagu sheegay in aysan qeyb ka ahayn shirka Golaha Wadatashiga Qaran, ee dhawaan Xukuumadda Xilgaarsiinta, Madaxda Maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir uga furmaya caasimadda.
“Dowladda Hirshabeelle waxay cadeyneysaa inaysan qeyb ka ahayn shirka Golaha Wadatashiga Qaran ee Dowladda Federaalka, Dowladaha Xubnaha ka ah iyo Maamulka Gobolka Banaadir berri uga furmaya Magaalada Muqdisho”. Ayaa lagu yiri warka xalay saqdii dhexe ka soo baxay Hirshabeelle.
Go’aankaan ayuu Maamulku u sababeeyay in aan laga talo galin qabsoomida shirka, sidaas daraaddeedna aysan quseyn wixii ka so baxay.
“Ugu dambeyn Hirshabeelle waxa ay dhowri doontaa fulinta Heshiiskii 17dii September iyo kii 27dii May ee lagu saxiixay Magaalada Muqdisho”. Ayaa sidoo kale lagu yiri warka.
Kaliya Madaxweynaha Hirshabeelle, Cali Guudlaawe, ayaa ka maqan Caasimadda, wuxuuna dhawaanahaan ku sugnaa dalka Turkiga, waxaana soo baxaya warar sheegaya in Maamulkiisu ka walaacsan yahay ajandaha shirka iyo qodobbo la xariira, degaan doorashooyinka iyo yareynta ergada dooraneysa Xildhibaannada Golaha Shacabka.
Go’aanka Hirshabeelle, ayaa horseedi kara dib u dhac hor leh oo ku yimaada qabsoomidda doorashooyinka, waxaana la rumeysan yahay in Madaxtooyadu ay qeyb ka qaadatay, go’aankaan iyo soo daahintii Guddiga doorashada Galmudug.
Shirka Wadatashiga Qaran, ayaa la filayaa inuu maanta billowdo, waxanaa diiradda lagu saarayaa qodobadii ka hirgalay heshiiskii 27-kii May, iyo qodobbo kale degaan doorashooyinka iyo yareynta ergada dooraneysa Xildhibaannada Golaha Shacabka.